सुखी र खुसी जीवनको स्रोत, प्रकृति - Nepal Bizz
Posted on ४ माघ २०७६, शनिबार १३:१८ Author admin	Comment(0)
आधुनिकताको नाममा हामी यसरी सुविधाभोगी बन्दैछौ कि, हामीलाई आफ्नै इन्दि्रयहरुको प्रयोग गर्न पनि जाँगर चल्न छाडिसकेको छ । सामान्य हिसाब-किताब निकाल्न हामी मस्तिष्क चलाउँदैनौ, क्याल्कुलेटर दबाउन थाल्छौं ।
सुख-सुविधाको यो आशक्तिले हामी आफ्नै शरीरको महत्व र मूल्य पनि बिर्सिरहेका छौं । हाम्रो शरीर कति अनमोल छ, कति रहस्यमयी छ, कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा भुलिसकेका छौं । किनभने हामी आफुभित्र खोज्नुपर्ने कुरा भौतिक दुनियामा खोजिरहेका छौं । त्यसैले त हामीले आज भौतिक सुविधा पाएका छौं, तर त्यसबाट सुखानुभूत गर्न सकिरहेका छैनौं । हामी ऐश-आरम त खोजिरहेका छौं, तर मन बेचैन छ ।
बस्नका लागि हामीलाई आरमदायक ठाउँ चाहिन्छ । त्यो पनि वताअनुकुलित । कोठा-कोठालाई कृतिम रुपले वताअनुकलित बनाएका छौं ।
खानका लागि हामीलाई थरीथरीका व्यञ्जन चाहिन्छ । त्यो पनि बेमैसमी । गाँस-गाँसमा तारेको, भुटेको, तयारी अवस्थाको खानेकुरा खाइरहेका छौं ।
यसको सोझो अर्थ के हो भने, हामी प्राकृतिक जीवनशैलीबाट विमुख हुँदैछौं । प्रकृतिबाट टाढा हुँदैछौं । यसको साइड इफेक्ट त हाम्रो शरीर, समाज सबैतिर परिसकेको छ । अप्राकृतिक जीवनशैलीका कारण आज हामी शरीरलाई अनेकन रोगको भण्डार बनाइरहेका छौं । हामी दिनदिनै रोगी, जिर्ण हुँदैछौं ।
अहिले अस्पतालमा रोगीको संख्या बढेको बढ्यै छन् । यसरी रोग बोकेर अस्पताल पुग्नेहरुमा धेरैजसो खराब जीवनशैलीका शिकार भएका छन् । कसैलाई मधुमेह छ, कसैलाई उच्च रक्तचाप । कसैलाई थाइराड त कसैलाई उच्च कोलोस्टोर । कसैलाई डिप्रेसन छ, कसैलाई अनेक किसिमको मानसिक रोग । क्यान्सर जस्ता घातक रोग पनि अहिले खराब जीवनशैलीकै कारण बढिरहेको छ ।
हामीलाई त लाग्छ, प्रकृतिलाई जितेर समुन्नत जीवन प्राप्त हुन्छ । तर, प्रकृतिलाई जितेर होइन, प्रकृतिसँग एकाकार भएर हामीले शान्त, सुखी, निरोगी, उन्नत जीवन प्राप्त गर्ने हो । किनभने सुख, स्वस्थ्य, खुसी, शान्ति सबै कुराको भण्डार भनेको प्रकृति नै हो । हाम्रो खुसीको स्रोत हो, प्रकृति । हाम्रो सुखको स्रोत हो, प्रकृति । हाम्रो जीवनको स्रोत हो, प्रकृति ।
दुःखलाग्दो चाहि के भने, आज त्यही प्रकृतिबाट विमुख भएर हामी सुख र खुसी खोजिरहेका छौं । त्यही कारण त यी तत्व हाम्रो लागि मृगतृष्णा बनिरहेको छ ।
खुसी र सुखको सर्वोत्तम स्रोत
जीवनबाट वास्तवमै आनन्द लिने हो । जीवनको मूल्य र महत्वलाई बुझ्ने हो । जीवनको खुसी र सुख अनुभूत गर्ने हो भने प्रकृति नै हाम्रो लागि सर्वोत्तम स्रोत हुनेछ । हामी जति जति प्रकृतिसँग लय मिलाउने छौं, जीवन उत्तिनै सुखी र खुसीपूर्वक वित्नेछ ।
अब प्रश्न उठ्छ, प्रकृतिसँग कसरी एकाकार हुने ? कसरी लय मिलाउने ?
आजको भौतिक युगमा हामी पूर्णत प्रकृतिसँग एकाकार हुन संभव नहोला । यद्यपी जीवनलाई प्रकृतिमैत्री बनाउन सकिन्छ । र, अहिलेको अवस्थामा यति नै काफी पनि छ ।
जस्तो खानपानकै कुरा गरौं । प्रकृतिले अनेक कुरा दिएका छन्, जो शरीरका लागि अति आवश्यक र महत्वपूर्ण छ । प्रकृतिले हामीलाई अनेक स्वादका अन्न, सागपात, फलफूल दिएका छन् । ति खानेकुरा हाम्रो शरीरको आवश्यक्ता हो । हाम्रो शरीरको माग हो ।
जैविक विधी एवं प्राकृतिक रुपमा उत्पादित यी खानेकुराले शरीरलाई उर्जावान राख्छ । निरोगी राख्छ । जब हामी निरोगी हुन्छौं, तन्दुरुस्त हुन्छौं, हामी खुसी र सुखी पनि हुन्छौं ।
प्रकृतिले हरेक मौसम र भूगोल अनुसार खानेकुरा उत्पादन गर्छ । यसरी मौसमी चक्र अनुसार उत्पादित खानेकुरा नै हाम्रो लागि सर्वोत्तम भोजन हो । अर्थात मौसमी खानेकुरा नै बढी उपयुक्त हुन्छ । अहिले वेमौसमी खेतीबाली लगाउने प्रचलन छ । वेमौसमी खेतीबालीबाट उत्पादित बस्तु स्वास्थ्यमैत्री हुँदैन ।
अक्सर प्रकृतिले दिएका खानेकुरा काँचो वा उसिनेर खान सकिन्छ । संभव भएसम्म ति खानेकुराहरु काँचो वा उसिनेर खानु उपयुक्त हुन्छ । स्वादको चक्करमा फसेर अनेक किसिमको अखाद्य तत्व मिश्रण गर्ने साथै त्यसलाई तारेर, भुटेर सेवन गर्ने कुरा राम्रो होइन ।
खानपानको कुरामा मात्र होइन, दिनचर्याको कुरामा पनि हामी प्राकृतिमैत्री बन्न सक्छौं । प्रकृतिले शरीरको सक्रियता र निस्त्रिmयताको लागि निश्चित समय दिएको छ । जब सूर्योदय हुन्छ, हाम्रो शरीर जागरुक हुनुपर्छ । सक्रिय हुनुपर्छ । चलयामान हुनुपर्छ । र, रातको समयमा शरीरलाई विश्रामको आवश्यक हुन्छ ।
उठ्ने, सुत्ने, बस्ने, खाने, हिँड्ने, कुद्ने सबै कुरा हाम्रो दिनचर्यामा नियमित हुनुपर्छ ।
अहिले हामी रातभर जाग्ने र बिहानभर सुत्ने गर्छौं । यो भनेको प्रकृतिमैत्री जीवन होइन । शरीर जागरुक र सक्रिय हुनुपर्छ । शरीर जति सक्रिय एवं चलयामान हुन्छ, उत्तिनै हामी निरोगी हुन्छौं । फूर्तिला हुन्छौं । तर, शरीरलाई विश्राम पनि चाहिन्छ । निश्चित अवधी हामीले विश्राम गर्नैपर्छ । शरीरले विश्रामको बेला पनि कतिपय काम गरिरहेको हुन्छ ।
उनीहरु कसरी यत्तिका उमेरसम्म बाँचे, कसरी जाँगरिला भए, कसरी निरोगी भए ? यस सम्बन्धमा खोज अनुसन्धान भइरहेको छ, निरन्तर । र, ति अध्ययनहरुको निचोडले भन्छ, उनीहरु एकदमै सक्रिय जीवन विताउँछन् । धेरैजसो खेतीबालीको काम गर्छन् । प्राकृतिक जीवनशैलीमा आफुलाई अभ्यस्त गराउँछन् ।
प्राकृतिक एवं मौसमी खानेकुरा सेवन गर्ने, खेतीबालीमा सक्रिय हुने, बोट-बिरुवा रोप्ने एवं हुर्काउने, बगैंचामा समय विताउने जस्ता अनेक गतिविधिबाट पनि हामी प्रकृतिसँग नजिक हुन सकिन्छ ।
आज जनै पूर्णिमा, : के छ एसको महत्त्व ,
Posted on ३० श्रावण २०७६, बिहीबार ०९:०२ Author admin
काठमाडौं : हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र पर्व जनै पूर्णिमा अर्थात् ऋषितर्पणी आज धुमधामका साथ मनाइँदैछ। जनै पूर्णीमाका दिन पुरोहितबाट नयाँ जनै फेर्नुका साथै हातमा रक्षा-बन्धन बाँध्ने परम्परा छ। यस दिन तराईमा दिदीबहिनीले दाजुभाइको नाडीमा राँखी बाँधेर मनाउने गर्छन्। यस्तै नेवारी समुदायमा क्‍वाँटी खाएर अर्थात् भ्यागुताको पूजा गरेर पर्व मनाउने प्रचलन छ। यस दिनमा बिहान नुहाइ धुवाइपछि […]
जापानमा युवतीका लागि खुसीको खबर कम्पनीले बनायो नक्कली ‘ब्वाइफ्रेन्ड’
Posted on १२ भाद्र २०७६, बिहीबार १५:०२ Author admin
टोकियो । एक भिडियो गेम कम्पनी लेबल–५ ले युवतीहरुका लागि एक नक्कली ब्वाइफ्रेन्ड तयार गरेको छ । एक्लोपनबाट दिक्क हुने युवतीलाई लक्षित गर्दै यस्तो ‘टेक्नोेलोजी’ तयार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नक्कली ब्वाइफ्रेन्डसँग युवतीहरुले अंकमाल गर्दै तनाव भगाउन सक्ने बताइएको छ । नक्कली ब्वाइफ्रेन्डलाई आफूखुसी कतै लैजान पनि सक्ने बनाइएको छ । थिएटर, रेष्टुरेन्ट, सपिङ […]
हिमालयन बैंकले प्रस्ताव गर्यो २२ % लाभांश